Global Voices teny Malagasy » Sina, Korea Avaratra: mitovy amin’i filoha Mao ve i Kim? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jolay 2009 0:09 GMT 1	 · Mpanoratra Winglok Hung Nandika Lila
Sokajy: Korea Atsimo, Korea Avaratra, Shina, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Politika
Ny 04 jolay lasa teo, fetim-pirenen'i Etazonia, dia nanao fanandramana nokleary vaovao indray i Korea Avaratra ka nandefa balafomanga 7, ary antonontonony ny fahalavirana vitan'ny sasany ka mampidi-doza an'i Japon sy Korea Atsimo. Raha noheverina fa mpanao didy jadona i Kim Jong Il dia milaza kosa ireo mpiserasera sinoa fa azo ampitoviana amin'i Mao izy.
Ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Mitovy amin'ny filoha Mao i Kim Jong Il” no niteraka resabe tao amin'ny seraseran-kevitra Qiangguo Forum  vohikalan-gazetim-panjakana Isan'androm-bahoaka. Ao amin'io lahatsoratra io dia mampifandray an'i Kim sy Mao i chibilanting amin'ny fomba fanatanterahany fampitahorana ara-miaramila. Araka ny heviny:
Ndeha hodinihana ny fotoanan'i Mao: fotoana fohy monja taorian'ny nanafahana an'i Sina dia nanambatra ny heriny tamin'ny firenena hafa i Etazonia hanafihana an'i Korea Avaratra. Niaro ny tanindrazantsika isika ary nanohana an'i Korea Avaratra. Mbola nijoro ihany isika taorian'ny ady ary voatery nanao sonia ny fifanarahana i Etazonia na dia tsy nandresy aza. Nozanahan'i Inde ny tanintsika, notafihantsika i New Dehli ary mbola nijoro ihany isika taorian'izany ady izany. Notafihan'i Sovietika ny nosintsika Zhenbao, niady isika, ary ankehitriny dia antsika i Zhenbao.
Raha nandefa ny zanabolany i Korea Avaratra dia tsy sahy nanakana azy i Etazonia sy Japon ary Kore Atsimo. Toa sangisangy! Nanao andrana nokleary i Korea Avaratra ary nanome sosokevitra tsy hanaovana izany ny Firenena Mikambana, kanefa vao maika nanamafy ny heviny i Korea Avaratra. Nilaza i Etazonia fa afaka manara-maso ireo sambo vaventin'i Korea Avaratra izy na dia teo aza ny vahaolana natolotry ny Firenena Mikambana, ka ny niafarany dia nandeha tsy nisy nanohintohina ihany ny sambo vaventy fahafito. Mety ho faty mosary ny mponina any Korea Avaratra, fa tsy hilefitra manoloana an'i Obama sy Lee Myung-bak ary Aso mihitsy i Kim. Mitovy tsisy valaka amin'i Mao, izay tsy nilefitra nanoloana izao tontolo izao! Mitovy amin'i Mao i Kim Jong Il!
Narahana fanehoan-kevitra marobe izany, hoy 221.205.34 ,
Tsy hafa fa mpianatry Mao i Kim Jong Il!!!
Miombon-kevitra amin'izany i Caiyunchangzai,
Mianatra ny fomba sy fisainan'i Mao i Kim!
Hoy i Gaoshanmei ,
Aleo lazaina hoe mafy be tahaka ny taolan'i Mao ny an'i Kim. Raha toa an'i Mao ny lehibentsika dia ho tsara vintana isika!
Hoy koa i 222.50.82  ,
Tsy azo ampitahaina amin'i Mao taloha i Kim, kanefa kosa manoatra noho ny governemantantsika ny taolany.
Mpitoraka bilaogy sinoa iray ao amin'ny Enjoy Drawing, no mampitaha an'i Kim amin'ny sarin'i Mao
Hoy ny filoha Mao “Eo am-bava-basy ny fahefana”. Ankehitriny efa mivoatra ny tontolo ka lasa hoe “Eo am-bavan'ny baomba atômika ny fahefana!”
Manazava ny antony hitsanganan'i Kim eo amin'ny sary ilay mpitoraka bilaogy:
Fantany fa tsy mitovy amin'i Saddam Hussein izy, satria niady irery i Saddam. Izy kosa manana mpanohana matanjaka dia i Sina izay efa nivoatra be tokoa fa tsy tahaka ny tamin'ny taon-jato lasa tamin'ny fotoana niadiany tamin'i Etazonia nandritra ny adin'i Korea .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/07/14/2662/
 Qiangguo Forum: http://bbs.people.com.cn/
 221.205.34 : http://bbs1.people.com.cn/postDetail.do?id=93090685&view=1&pageNo=3&boardId=60
 Enjoy Drawing, : http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ab60f230100dcau.html